ပန်ဒိုရာ: ပိုပို မိုမို ဂိုဂို - အပိုင်း ၅
အဲ... ဘဲငန်းတွေအကြောင်းက ပြောပြစရာ ဇာတ်လမ်းတွေ အတော်များတာပါလား...
ဆက်ရန်ကို စောင့်ရအုံးမှာပေါ့...း))
ညီမလေးက သူတို့ကို တုတ်တချောင်းနဲ့ ဆူနေ ပြောနေတဲ့ ပုံကို မြင်ယောင်ကြည့်ရင်း ကိုလေး ဒေါပွနေတဲ့ ပုံကိုပါ မြင်ကြည့်သွားတယ်... ခွိခွိ...း))
I maybthe first one for part 5.We (my bros n sis) also hadagroup of goose.U brought me our childhood back.Lovely story.
Sorry! Thetwai. U r the 1st one.
ပြောရင်း ဆိုရင်း အနံ့တောင်မှ ရလာသလိုပဲ....
ဒါနဲ့ စကားမစပ် မဒိုဒိုက အဲဒီငန်းလေးကို အရမ်းချစ်တာပဲ ၊ အမြဲတမ်းပွေ့ထားတယ်ဆို. . :P
ဘဲငန်းတပ်တော်ကြီးကို တပ်ချုပ်ကြီးက သြ၀ါဒချွေနေပုံကို မြင်ယောင်ပြီး ပြုံးသွားပါတယ်
ဘဲငန်းတွေကို briefing ပေးနေတဲ့ ညီမလေးကို မြင်ပြီး ပြုံးသွားပါတယ် ... ကိုယ်လဲ ကြောင်တွေ မွေးတုံးက သူတို့တွေကို briefing ပေးနေကျ။ ဟီးဟီး
ဂိုဂိုတို့ မိသားစုအကြောင်းဘာလိုလိုနဲ့ အပိုင်း၅ရောက်သွားပြီနော်....ညီမလေး တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ခတ်စပ်စပ်လေးရိုက်လိုက်ပုံနဲ့ ကိုလေးဘဲငန်းဆယ်တဲ့ပုံတွေကို သဘောကျမိတယ် ပြီးတော့ ငှက်ပျောပင်တစ်ပင်ကိုများထိုးဆိတ်ကြတာ မိနစ်ပိုင်းပဲတဲ့... တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဘဲငန်းတပ်မကြီး..
ပန်ပန်ရေ ... ဘဲပုံပြင်လာဖတ်သွားတယ်။
ဘဲလေးတွေက နားလည်သားပဲ။ ဘာ ဘာသာစကားနဲ့ briefing ပေးလိုက်တာလဲဟင်..